Nuur Max?ed Nuur oo loo doortay guddoomiyaha PUNSAA; ku xigeenkiisa oo loo doortay C/fitaax Max?ed Sugulle. – Radio Daljir
Garoowe, June 02 – Waxaa caawa lagu doortay magaalada Garoowe ee xarunta Puntland Guddoomiyaha dalladda ay ku midaysan yihiin ururada aan dawliga ahayn ee Puntland ee magaceeda loo soo gaabiyo Punsaa, waxaana guddoomiye loo doortay Nuur Maxamed Nuur, halka ku xigeenkana loo doortay C/Fataax Max?ed Sugulle.
Murashaxiin badan ayaa isku soo taagay jagooyinka guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa, waxaana ka mid ahaa ragga aadka ugu cad-caddaa u tartamidda jagada guddoomiyaha dalladda Cabdisalaan Maxamuud Jaamac ‘Salwe’ oo ah suxufi ruug caddaa muddo dheerna ku soo jiray hawlaha war-baahinta. Markii dambena uga tanaasulay guddoomiyaha la doortay.
Nuur Maxamed Nuur oo ah guddoomiyaha hadda bannaayey jagada guddoonka dalladda mar labaadna xilkaasi isku soo taagay hadana guuleystay, iyo sdioo kale isla jagadaasi guddoomiyaha u tartamayey muraxshax kale oo lagu magacaabo Cabdi Ibraahim Xassan.
Halka jagada guddoomiye ku-xigeenkana ay u tartamayaan saddex muraxsharax oo kala ah C/fitaax Maxamed Sugulle oo hadda la doortay, Maxamed Ibraahim Guure iyo Saynab Xaaji Ayaanle.